Puma PT9100, smartwatch vaovao misy 250 euro | Androidsis
Nanambara tamin'ny volana septambra i Puma fa manamarina ny fahatongavan'ireo manan-tsaina fiambenana Puma PT9100, famantaranandro miaraka amin'ny rafitra fiasa Android 4.4+ toy ny mahazatra. Ny marika Alemanina dia te handray ny dingana amin'ny fivarotana famantaranandro hafa amin'ny hafa ary mandeha amin'ny fanampiana zavatra hafa amin'ny ambin'izay efa hita hatreto.
Tonga any India aloha izy io, saingy any amin'ny firenen-kafa no hanaovany izany raha vao amidy any amin'ity faritany ity sy ny faritra hafa toy ny mahazatra. Ny hevitra dia ny hivarotra azy, hanao lavaka ary ho lasa safidy eo amin'ireo karazana famantaranandro marani-tsaina misy ankehitriny.
Ny fiasa amin'ny PT9100
El Puma PT9100 Manampy fàfana AMOLED 1.19-inch miaraka amina résolution 390 x 390 pixel ary apetraka ao anaty casing 44mm. Manampia fanaraha-maso ny tahan'ny fo, NFC, fanoherana ny rano hatramin'ny 5ATM ary ny fomba fitiliana fanatanjahan-tena rehetra izay ny fenitra.
Ity maodely ity dia mampiditra ny processeur Snapdragon Wear 3100 miaraka amin'ny RAM 512 MB sy fitehirizana 4 GB. Ny fiainana bateria dia manodidina ny 24 ora fiaretana amin'ny fampiasana ny GPS mifandray, Wear OS no ampiasaina ho mpiorina lehibe amin'ny alàlan'ny efijery mikasika.
El PT9100 dia afaka mifindra amin'ny alàlan'ny Bluetooth 4.2 ary mifanaraka amin'ny telefaona iOS 9.3+ sy Android OS 4.4+ izy io, ankoatra ny kinova hafa. Puma dia te-hanome famolavolana tsara ary haneho famataran-tsarimihetsika tsara ho an'ireo mpampiasa izay te-hividy an'ity singa ity izay azon'ny rehetra ampiasaina izao.
Puma PT9100 tonga amin'ny loko mainty, fotsy ary mavo, amin'izao fotoana izao ao anaty alokaloka telo ary hisy variant atsy ho atsy. Ny vidin'ny PT9100 dia manodidina ny 250 euro, ny vidin'ity rindrambaiko fanta-daza fanta-daza ity izay ho azontsika atsy ho atsy Espana, indrindra amin'ny faran'ny volana feb.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Puma PT9100, smartwatch vaovao misy 250 euro